बेलहिया बुटवल छ लेन सडक पानीले जाम,पूर्वमन्त्री पाण्डेको जनतामारा काम ! — Arthatantra.com
Arthatantra.com > अटो > बेलहिया बुटवल छ लेन सडक पानीले जाम,पूर्वमन्त्री पाण्डेको जनतामारा काम !
नरेश के.सी.,भैरहवा । राप्रपाका नेता तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेले ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण कार्य थालेको बुद्धचौंक सडकखण्ड अहिले अलपत्र परेको छ । राष्ट्रिय गौरबको आयोजना बेलहिया बुटवल व्यापारीक मार्ग अन्र्तगतको सो सडकखण्ड २०७३ असार ३१ मा सम्पन्न गर्नेगरी सांसद समेत रहेका पाण्डेको निर्माण कम्पनीले ठेक्का लिएको थियो । तर अहिले एक वर्ष वितिसक्दा समेत निर्माण कार्यको प्रगती सन्तोषजनक देखिएको छैन ।
बेलहिया बुटवल व्यापारीक मार्ग अन्तरगतको उक्त सडक निर्माणको ठेक्का कालिका तामांग प्यासेफीकले लिएको थियो । २०७२ असार १ (१६ जुन २०१४ ) मा कालिकाले २०७३ असार ३१ (१५ जुलाई २०१६) भित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी ४५ करोड ६४ लाख १ हजार ४ सय ८६ रुपैयामा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उक्त लागतमा ठेकेदार कम्पनीले डण्डामा ४० मिटर लम्बाइ र १० मिटर चौडाइको पक्की पुल, डण्डा पुलदेखी सीता नर्सरी सम्म ७ सय मिटर बाटो र ब्रमेलीटोलदेखी अन्चलपुर सम्म १४ सय मिटर बाटो निर्माण गर्नेगरी सम्झौता गरेको थियो । अहिले सम्झौता अनुसारको समय सकिएको एक वर्ष वितेको छ । तर कामको प्रगति भने फाइनान्सीयल हिसाबले ५२ प्रतिशत र भौतिक हिसाबले ६० प्रतिशत मात्रै भएको सो साइट हेर्ने बेलहिया बुटवल व्यापारीक मार्ग आयोजनाका इन्जिनीयर योगेन्द्र अधिकारीले बताए । उनले भने ‘काम जुन गतीमा हुनुपर्ने त्यो हुन सकेको छैन । धेरै ढिला भइरहेको छ । ’
पछिल्लो समयमा ठेकेदार कम्पनीले २०७४ साउन १९ गते निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी आयोजनासंग म्याद थप गरेको थियो । सो म्याद पनि आउन अब करिब २ महिना छदां सम्म कामले तिब्रता नपाउदां आयोजनाको काम नै प्रभावित भएको छ । काममा भएको ढिलाईको बारेमा आयोजनाले बारम्बार निर्माण कम्पनिलाई लिखीत रुपमा ताकेता गरेको भएता पनि शक्ति र सत्ताको भरमा आयोजनाको निर्देशनलाई टेरपुच्छर लगाएको छैन । आयोजना प्रमुख जिबेन्द्र मिश्रले काम गर्नेगरी काम लिने अनि शक्ति र सत्ताको भरमा ढिलाई गरेर, अटेर गरेर बस्ने जो सुकै भएपनि कारबाहि गरिने जनाए ।
ब्रमेलीटोलदेखी अन्चलपुर क्षेत्रमा अहिले हिड्नै नसकिने गरी खाल्डाखुल्डी पारिएको छ । डण्डामा निर्माणाधीन आरसीसी ब्रीज त्यतिकै अलपत्र छ । काम भइरहको छ तर अत्यन्तै ढिला गतिमा भइरहेको छ ।
ठेकेदार कम्पनिका मान्छेलाई भन्दा भन्दै वाक्क भएपछि बुद्धचौंक क्षेत्रका स्थानियहरुले गत कार्तिक महिनामा सिडिओ कार्यलयमा उजुरी गर्न पुगे । पछि सिडिओको संयोजनमा स्थानियबासीन्दा र निर्माणकम्पनिका प्रतिनिधीबीच छलफल भई समयै काम सम्पन्न गर्ने, सम्झौता अनुसार नियमित धुलायम्मे सडकमा पानी हाल्ने, संकेत चिन्ह राख्ने, व्यस्त सडकमा सवारी साधन र पैदलयात्रुको सेवालाई प्रभावित नगर्ने जस्ता सहमति भए । तर ती सहमती ठेकेदार कम्पनीले केहि दिन लागु गरेजस्तै गरेता पनि पुनः रद्धिको टोकरीमा थन्काइदिएको नागरिक अगुवा विष्णु प्रसाद मरासीनिले जनाए । उनले भने ‘ निर्माणकर्ताले सम्झौता अनुसार कामै गरेको छैन । हिउंदभरी धुलो खाइयो , वर्षातमा हिलो । हामी जनताले कहिलेसम्म सास्ती खेप्ने ? ’
ठेकेदारको लापरबाहीको कारण अहिले लुम्बिनीको प्रवेशद्वार भैरहवाको केन्द्र ब्रमेलीटोल क्षेत्रमा आवतजावतमा ठूलो समस्या परेको हो । सवारीसाधनको अत्यन्तै चाप हुने उक्त क्षेत्रमा ठेकेदारी कम्पनीले जथाभावी खनेका खाल्डाखुल्डी र त्यहां जमेको पानीको कारण वर्षातको बेला आजभोली पैदलयात्रुहरु सो बाटो हिड्दा सास्ती खेप्नुपरिरहेकोछ । पैदल यात्रु मात्रै होइन रिक्सा चालक, साइकल चालक र मोटर साइकल चालकले पनि त्यस्तै सास्ती खेप्नु परेको देखिन्छ । ठूलो ठूला दसचक्के गाडीहरु समेत हिड्ने सो सडक खण्डका खाल्डामा जमेको पानी सवारी साधनको तिब्र गतिमा थिचीदा छेऊछाऊका घरहरु पनि हिलाम्यै बनेका छन् ।
यता ठेकेदार कम्पनिले समयमै कच्चा पदार्थ नपाउदां काममा ढिलाई भएको बताएको छ । कालिका तामांगका इन्जिनीयर रामु ज्ञवालीले भने ‘गिट्टी, ढुंगा, बालुवा पाइएन त्यसैले ढिला भएको हो । ’ ज्ञवालीले काम समयमै हुन नसकेको स्वीकार्दै खाल्डाखुल्डी पुर्ने प्रयास भइरहेको बताए ।
निर्माण कम्पनिका प्रतिनिधीले त्यसो भनिरहदा आयोजनाले सेमरीनाकाबाट १६ हजार घन मिटर र नयामिल नाकाबाट ४ हजार घनमिटर कच्चापदार्थ निकासा गरि दिएको बताएको छ ।
शुरुमा ठेक्का लिई पेश्की रकम लिन तछाडमछाड गर्ने ठेकेदार कम्पनीले अहिले सडक निर्माणको काम यत्तिकै अलपत्र पारेकोछ । राष्ट्रिय गौरबको यो आयोजना अधुरो मात्रै नभएर अलपत्र अवस्थामा परेका छन् । काम गर्न नखोज्ने तर सोर्स फोर्स लगाएर समयावधि थप्ने ठेकेदारहरुको मनोवृति कालिकामा तामांगमा देखिएको छ ।
बहुवर्षिय ठेक्काको रुपमा रहेको राष्ट्रिय गौरबको यो आयोजना समयमा पुरा नहुदां यस क्षेत्रमै बनिरहेको अन्तराष्ट्रिय विमान स्थल, लुम्बिनी विश्व शान्ति शहर जस्ता सरकारका अन्य आयोजना समेत प्रभावित हुने देखिन्छ । बेलहिया बुटवल व्यापारी मार्ग २७ किलोमिटरको रहने र सो क्षेत्रमा पुल, ओभरहेड ब्रिज देखी दायाबाया सडक, सेन्टर सडक, विचमा ३ मिटर ग्रीनरी, नाला, फुटपाथ सहित अन्तराष्ट्रिय स्तरको बनाउने योजनामा छ । यसको शुरुवातको लागत ४ अरब १६ अनुमान गरिएता पनि पछि गोलपार्क सम्म सडक थपीएपछि अहिले ६ अरब पुगेको छ ।
उक्त सडक बनाउन शुरुमा साना शहरी एकिकृत वातवरणीय सुधार आयोजना अन्तरगत एशियाली विकास र्बैंकले चासो देखाई २ अर्ब ४२ करोड दिने इच्छा जाहेर गरेता पनि पछि डा. बाबुराम भट्टराईको पहलमा सो सडक नेपाल सरकारले नै बनाउने गरी काम अगाडी बढाइएको थियो ।
प्रकाशित मितिः २०७४ जेठ २६
२०७४ जेष्ठ २६ गते १७:०५ मा प्रकाशित
दुई वर्षअघि बन्द भएको चितवन मिल्क पुनः सञ्चालन हुने
चुडामणि शर्मालाई थप ६ दिन हिरासतमै राख्न विशेषको अनुमति
जाटद्वारा जेटूजे सम्मेलनमा भाग लिनेलाई सचेत रहन आग्रह
नेशनल हाइड्रोको साधारण सभा स्थगित, कहिले होला अब !
नेपालको पानी निर्यात गर्ने विषयमा खानेपानी मन्त्री र कतारी राजदूतबीच छलफल
ट्रम्पले अब गैह्र कानूनी रुपमा बसेका ३० लाखलाई अमेरिकाबाट निकाल्ने !